Musharixiinta Madaxweynaha ee Beelahooda weydiistay Kursi Xildhibaan (Maxaa ka khaldan?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DoorashadaMusharixiintaSomaliTooshka GJXog cusub
Xasan Sheekh ayaa ah xildhibaan joogto ah, markii uu si nabad ah xilka ku wareejiyey laakiin Maxamed Farmaajo ayaa xuquuqdaas ku weyn kara xil kororsiga uu sameeyay iyo qalalaasihii ka dhashay
Doorashada jiitameysa ee Soomaaliya 2021/2022 waxaa kusoo kordhay arrimo ku cusub Doorashadii dadbanaa ee dalka, iyadoo Doorashadan u muuqato mid ka xiiso yar, kana musuq badan tii ka horeysay.
Musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha qaarkood ayaa dareemay in doorashadan ay tahay mid halis badan, waxayna horeba dadaal ugu faleen inay marka hore xaqiijiyaan sidii ay ku noqon lahaayeen xildhibaan Golaha Shacabka.
Musharixiinta waaweyn ee tallaabdan ku dhaqaaqay ayaa olole ka dhex sameeyay beelahooda si loo siiyo kursiga xildhibaan ee Golaha shacabka, qaarkood ayaa ku guuleystay, halka qaar kale ay weli dadaal ku jiraan ama rajadoodu aysan kala caddeyn.
Musharixiinta kurasta xildhibaan xaqiijiyey waxaa ka mida:
– Xasan Sheekh Maxamuud: Waa xildhibaan joogto ah oo dheeraad ku ah 275-ta Golaha, kadib markii uu xilka si nabad ah ku wareejiyey, xilkaas oo Maxamed C/llaahi Farmaajo uu ku weyn karo muddo kororsigii uu sameeyay iyo qalalaasihii uu dalka geliyey April 2021.
– Shariif Sheekh Axmed: Madaxweynihii hore iyo musharax madaxweyne wuxuu ahaa musharixii ugu horeeyay ee jufadiisa ka dalbaday inay siiso kursiga xildhibaan, arritnaas oo ahayd mid aad loola yaabay, dadka qaarkiisna ay ku sifeeyeen inay hoos u dhacday rajadiisa xilka Madaxweynaha ayey Beeshiisa siisay kursiga, waxayse shardi uga dhigtay inuu isagu noqdo xildjibaan ee aanu cid kale siin karin.
– C/raxmaan C/shakuur Warsame: Musharax Madaxweyne Doorashada 2021/22 wuxuu dadaal u galay sidii uu ku noqon lahaa xildhibaan beeshiisa u metala Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad, waxaana markii hore u suuragashay in la siiyo, balse muddo kadib ayaa rajadaasi uu mugdi soo galay, waxaana la sheegay inuu isaga haray dadaalkiisii xildhibaannimo.
– Shariif Xasan Sheekh Aadan: Waa musharax u taagan xilka madaxweynaha oo beeshiisa ay siisay kursiga Golaha shacabka, kaasoo uu horeba ugu fadhiyey wiilkiisa, waxaana Shariif Xasan uua ka mid yahay Musharixiinta la hubo inuu ka mid noqon doona Baarlamaanka cusub.
– C/qaadir Cosoble Cali: Waa musharax kale oo mar kale u tartamay kursiga xildhibaan ee uu ku fadhiyey Baarlamaankii 10-aad, waxase la filayaa inuu tartan xoog leh wajaho, taasoo tijaabo u noqon doonta heerkiisa Musharax Madaxweyne.
Ujeedada Musharixiinta madaxweynaha qaarkood u doonayaan kuraas xildhibaan ayaa kala duwan, qaarkood ujeedkooduba wuxuu ahaa kursi xildhibaan oo rajo badan kama laha xilka ay u sharxan yihiin, qaar kale waa inay marka hore xilkan xaqiijiyaan, halka qaar yar ay doonayaan inay ka dhex ololeeyaan gudaha Baarlamaanka.
Waxaa jira musharixiin kale oo dadaal ugu jira inay ka mid noqdaan xildhibaannada Baarlamaanka, laakiin anay kala caddeyn inay heli doonaan marka la eego tartanka kuraasta loogu jiro oo ku xiran beesha leh, dhaqaale iyo is-baheysi siyaasadeed.
Previous articleRa’iisal wasaraha Itoobiya: “Ciidamo Ajnabi ah ayaa dagaalka gacan ku siinaya Argagixisada TPLF..”
Next articleDadka Caasimadda Addis Ababa oo Hubkooda la diiwan gelinayo si ay dagaal ugu diyaar garoobaan